1 USD သို့ HKD ᐈ ပွောငျး $1 အမေရိကန် ဒေါ်လာ တွင် ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာ
1 USD သို့ HKD
သငျသညျပြောင်းလဲပါပြီ 1 🇺🇸 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ 🇭🇰 ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာ. သငျသညျအရှိဆုံးတိကျမှုရလဒ်ပြသနိုင်ဖို့ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာငွေလဲလှယ်နှုန်းကိုအသုံးပြုပါ. ငွေကြေးပြောင်း 1 USD သို့ HKD. ဘယ်လောက်လဲ $1 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာ? — HK$7.767 HKD.ယင်းကိုကြည့်ပါ ပြောင်းပြန်သင်တန်း HKD သို့ USD.ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သင်၌စိတ်ဝင်စားဖြစ်နိုင်သည် USD HKD သမိုင်းဆိုင်ရာဇယား, နှင့် USD HKD သမိုင်းဆိုင်ရာမှာ data ငွေလဲနှုန်းကို၏. ကြိုးစားကြဖို့အခမဲ့ခံစားရ ပိုပြီးပြောင်း...
ပွောငျး 1 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာ
မှုနှုန်းခြင်းအားဖြင့်: HK$7.767 HKD (0.000494)0.00636%
ပြောင်းပြန်: $0.129 USD
မင်းသိလား? တစ်ဦးကလွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်, ထိုနေ့၌, ငွေကြေးနှုန်းကို အမေရိကန် ဒေါ်လာ ရန် ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာ ခဲ့: HK$7.751. ထိုအချိန်မှစ. ငွေလဲနှုန်းရှိပါတယ် တိုး 0.0162 HKD (0.209%).
50 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာ100 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာ150 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာ200 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာ250 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာ500 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာ1000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာ2000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာ4000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာ8000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာ5000000 အီရန်ရီအော်လ် သို့ အာမေးနီးယားဒရမ်း200000 နမီးဘီးယား ဒေါ်လာ သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာ340 Dogecoin သို့ ထိုင်းဘတ်8650 ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာ သို့ အိန္ဒိယ ရူပီး50 ယူရို သို့ Ripple200 CinderCoin သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ19000 တောင်ကိုရီးယား ဝမ် သို့ အီရန်ရီအော်လ်16300 တောင်ကိုရီးယား ဝမ် သို့ အီရန်ရီအော်လ်0.03 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ အိန္ဒိယ ရူပီး225000 တောင်ကိုရီးယား ဝမ် သို့ အီရန်ရီအော်လ်124100 MorpheusCoin သို့ ယူရို1 MorpheusCoin သို့ ယူရို2.4 ယူရို သို့ တရုတ် ယွမ်1 တောင်ကိုရီးယား ဝမ် သို့ အီရန်ရီအော်လ်